Waxaa jira siyaabo dhowr ah si loo hubiyo in flash ama drive suulka aan xijaabi oo keliya, laakiin waxaa sidoo kale u qaybsan sida baahida iyo rabitaanka ah user si loo hubiyo in files iyo sidoo kale fayl ka waxaa loo habeeyey sida uga wanaagsan ee suurto gal ah . Waa in la ogaadaa in ay jiraan faa'iidooyin dhawr ah oo la xidhiidha Risaalo ka mid ah drive suulka tusaale ahaan codsiyada ka hor qaar ka mid ah in loo baahan yahay boot USB lagu rakibi karo si gaar ah qaybaha USB ah si loo hubiyo in user helo qiimaha badan ee this la xiriira. Sidoo kale waa in la ogaadaa in marka flash ah waxaa markaas xijaabi xirfadlayaasha ah in ay isticmaalaan qalab ay taasi si loo soo dajiyo daaqadaha iyo si loo hubiyo in boot nidaamka USB la soo xulay rakibi karaa laba qeybood oo ciriiri kala duwan ee OS si loo hubiyo in mid ka mid ah sida per doorashada ee ay macmiilka la geliyo si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo taas oo haddii kale waa suurto gal ahayn haddii USB aan la xijaabi. Sidoo kale waa mid ka mid ah ku dhaqanka ugu fiican si loo hubiyo in maqaal qoruhu USB waxaa loo magacaabay per waxay doonayaan iyo fayl yihiin in la xiriira magac gaar ahi aanay u kaydiyaa oo kaliya balse ay sidoo kale waxaa lagu heli fudayd iyo qanacsanaanta. Sidaas darteed waa xaqiiqda ah in dhalashada partitioning flash waa baahida loo qabo in Saacadda kuwa u baahan gabal casriga ah taas, inuu u shaqeeyo siyaabo kala duwan ah.
Waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo ka hor inta partitioning ah
User A waa inay hubiyaan in labo ka mid ah waxyaalaha aan la sameeyaa oo keliya ka hor inta USB la xijaabi laakiin waxa ay sidoo kale in la xusay in user a waa in ay hubiyaan in habka xilgudashada ugu habboon ayaa sidoo kale raacay si ay dhacdo in shil kasta oo version hore waxaa riddoobay sameeyo waa in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ka hor partitioning flash waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah farsamooyinka tahay waxaa laga codsadaa in ay qaban shaqada iyo qaar ka mid ah waxaa lagu sharaxayaa sida hoos sameeyo:
1. Macluumaadka gurmad
Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah tallaabo tahay in la qaadaa si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaatada. Xogta jooga drive USB waa in raad raac si aad u hubiso in user helo natiijada ugu wanaagsan ee kiiska Risaalo ku guuldareysto. Waxaa sidoo kale in la xuso in aan sidaa yeelno ayaa sidoo kale u oggolaan doona in user ay u noqon, in version hore dhaqso suurto gal ah.
Software 2. ah Barzakh,
Software xijaab Good waa in la isticmaalaa si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo hab ugu fiican. User waa inay hubiyaan in taageero barnaamijka iyo sidoo kale astaamaha in lagu gundhig u fiican oo haddii qaababka waafaqsan yihiin shuruudaha markaas software ka shaqayn doonaa sida ugu fiican si ay shuqulka hawsha u sameeyo, waayo, user si fudud.
Step by tutorial talaabo si Barzakh drive USB ah h
Tutorial ah in loo soo bandhigi doono qaybtan waa state of tahay sida ay qoreysa qalabka ay og in shuqulka hawsha u sameeyo oo aan wax arrin oo ka kaaftoomi. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in tallaabooyinka ay halkan ku xusan la raacay sida looga baahan yahay iyo si la mid ah, taas oo ay halkan ka muuqan si loo hubiyo in ugu wanaagsan ee la sameeyo sameeyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in qalabka waxaa loo baahan yahay in loo xiraa waaqiciga ah si loo hubiyo in natiijada yahay oo waafaqsan shuruudaha user iyo sidoo kale ay ka heli Risaalo ka fiican markii aan laga badinin wixii xog ah iyo dadaal . Geedi socodka ma aha waqti at dhan iyo user waa in kaliya raac tallaabooyinka lagu xusay ee hoosyimaada halkan:
1. xogta waa in ay gurmad iyo shouldbe USB drive ee geliyo dekedda in loo isticmaalo isku mid:
2. Barnaamijka bootit Lexar waa in lagu xiro in la sii wado,
3. USB waa in la magacaabay ama saxday sida saari karo:
4. user waa in markaas hubiyo in maamulka disk la furay gudahood daaqadaha iyo waxa la qaban karo, ay xaq u riixaya ee icon My Computer ka dibna xulashada Maaree:
5. xijaab hadda waa in la tirtiro ee buuxa:
6. user waa in markaas hubiyo in Risaalo cusub oo loo abuuray sida rabitaan iyo u baahan tahay iyo iot sidoo kale ka baxayo geedi socodka:
Sidee si ay u hubiso haddii Risaalo waa guul, waxa la sameeyo marka It`s guuldareystay
1. user waa in ay hubiyaan in habka ugu fiican ee la fuliyay ee arrintan la xiriira oo waxaa la samayn karaa oo ay hubiyaan in drive USB la galiyo mar kale ka dib markii habka qoqobkii ayaa ku dhameysatay kaalinta sameeyo. Waxaa hadda ku tusi doonaa drives badan in guddi My Computer ah.
2. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in xogta la wareejiyo oo ka drive ka dhigi iyo haddii loo sameeyo si sax ah ka dibna waa in la ogaadaa in user ku raaxaysan karaan sida Risaalo ayaa guul.
Xaaladdan Risaalo ayaa ku guuldareystay user ma awoodi doonaan in ay fuliyaan hawl kasta oo ah in lagu kor ku soo sheegnay iyo sababta ay isla sidoo kale waa in la ogaadaa in talaabooyinka soo socda ayaa lagu tijaabin karaa:
1. Lexar bootit waa in la cusbooneysiiyaa, sida tilmaamaha ku qoran shabakadda internetka oo user waa inay ku dadaalaan in ay mar kale Barzakh drive ka.
2. drive waa in la reinserted iyo geeddi-socodka waa in ay si aad u hubiso in ay jirto guulo la fuliyo mar kale.
3. user waa in sidoo kale la hubiyo in qalabka la marsiiyey la antivirus si loo xaqiijiyo in sida ugu fiican ee loo sameeyaa in lagu drive ku jirta su'aasha.
> Resource > Flash Drive > Talaabada hagitaan talaabo talaabo si ay xijaab flash ah